आज असार ७ गते मंगलबार, हेर्नुहोस् राशिफल कस्तो छ त तपाईको आजको दिन ? « Sansar News
आज असार ७ गते मंगलबार, हेर्नुहोस् राशिफल कस्तो छ त तपाईको आजको दिन ?
७ असार २०७९, मंगलवार ०६:५८
मेष –चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
कन्या –टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
तुला –र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
वृश्चिक –तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा कमजोर देखिनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिन छाड्नेछन् भने प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दुःख दिनेछन्। अस्वस्थताले कमजोर महसुस हुनेछ। तापनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। अध्ययनमा गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले काम बनाउन सकिनेछ।
मकर –भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
छोटो समयमा विशेष उपलब्धि हातलागी हुनेछ। विभिन्न स्रोत–साधन प्राप्त हुनेछन् भने गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। नगद जुट्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउला। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। नौलो प्रकृतिको काम शुभारम्भ गर्ने मौका छ।
आत्मविश्वासको कमीले काममा पछि परिनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ। खर्च हुने डरले सताउन सक्छ। वादविवादबाट टाढा रहनुहोला। अर्थ अभावले पनि काममा बाधा पुग्नेछ। आफ्ना सूचनासम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर काम लिनुहोला, आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।
२०७९ असार ७ गते, मंगलवार,(२१ जुन २०२२)
तपाईको आज सोमबारको राशिफल भन्छ–आज यी ६ राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान !
तपाईको आज बुधबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ…